Point to Re-remember:
Static Design ကိုပဲ ရည် ရွယ်ပါတယ်။ Dynamic Design မှာက ငလျင် နဲ့ မုန်တိုင်းစတဲ့ Lateral force တွေကိုပါ စဉ်းစားရ တော့ Column တွေကလဲ Bending/ Flexural Action ဝင် လာပြီး Tension Zone ရဲ့နေရာယူမှုက သိသာလာပြီး Column တွေဟာ Compression Control မဖြစ်တဲ့ case ရှိပါတယ် .. Engineering မှာ ပုံသေမမှတ် ရပါ Depends on time & situation ပါပဲ
R.C column မှာ Load ကိုထမ်းပေးတဲ့ Materaial နှစ်မျိုးပါတယ် ..Steel နဲ့ Concrete ပေါ့
Column မှာ Steel/Rebar ထက် Concrete က ပိုအ ရေးကြီးပါတယ်။ Column ဆိုတာ compression
member ဖြစ်တဲ့အတွက် Elastic Stage က နေ Ultimate Stage ထိ Concrete ကသာ Loads တွေကို အဓိက ထမ်းပေးသွားမှာပါ။ Concrete က Compression ကိုကောင်းကောင်းခံနိုင် တယ်လေ
for 8"x8" square column with 6No.5Bars, fc'=4ksi, fy=50ksi
C=Loads carried by Concrete
S=Loads carried by Steel
= (Ac x fc) + (As x fs)
= (8x8x4) + (6x0.31x50)
= 256 kips + 93 kips
ဒီမှာ Concrete က Steel ထက် ပိုပြီးအလုပ်လုပ်တာသိသာပါပြီ။ ဒါက Elastic Limit မှာပါ။ Ultimate မှာလဲ Steel က concrete ထက် အလုပ်ပိုမလုပ်ပါဘူး။ ဒါဆို ဘာကြောင့် Steel ထည့်ထားပါသလဲ?
‎Static‬ Design မှာ Compression
Reinforcement အ နေနဲ့ထည့်ပါတယ်။ Mild Steel တွေက Tension ရော Compression ရော almost equally resist လုပ်ပေးနိုင် လို့ပါ ...
Dynamic‬ Design မှာက Column က Beam Action ဝင် လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Both Tension & Comp. Reinforcement အတွက်ပေါ့ဗျာ
Static Design Column - 8"x8"
Dynamic Design Column - 12"x12"
၁၂ ပေထက် ထက် မမြင့်ပဲ ခန်းဖွင့်လဲ ၁၅ ပေထက်မကျယ်တဲ့ အ နေအထားအတွက်သာ အကျုံးဝင် ပါတယ်
Rebar percentage က တော့ ACI-code အရ
1% နဲ့ 8% အတွင်း ရှိရင် ok ပေါ့ဗျာ
1% ထက်နည်းရင် steel နည်းနေပြီး 8% ထက်များရင် Steel congestion ကျပ်ပြီပေါ့။
for above column,
p(rho) = As/Ac
= 6x0.3/ 8x8 = 0.029 = 2.9% (ok)
ဒါက column တစ်ခုရဲ့ အလွယ်ဆုံး Structure ပါပဲ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေပေးပြီးဖတ်တာ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်ခင် ဗျာ။